कमाइ खस्के पनि साहोबाट प्रभास बने एक मात्र अखिल भारतीय सुपरस्टार - Everest Dainik - News from Nepal
कमाइ खस्के पनि साहोबाट प्रभास बने एक मात्र अखिल भारतीय सुपरस्टार
प्रभास अभिनित साहोको दोस्रो सप्ताहान्तको कमाइ पहिलोको तुलनामा ८१ प्रतिशतले खस्केको छ। बलिउड व्यापार विश्लेषक तरण आदर्शले प्रभासको लोकप्रियताका कारण पहिलो सप्ताहान्तमा हिन्दी संसकरणबाट मात्रै ७९ करोड कमाएको साहोले दोस्रो सप्ताहान्तमा भने १४. ९५ करोड मात्र कमाउन सक्यो।
ठुलो लगानीमा निर्माण भएको र बाहुबली२ सँग तुलना गरिँदै गरेकाले चलचित्रको कमाइलाई धेरै सन्तोषजनक मान्न सकिएको छैन। तर यस चलचित्रको कमाइलाई अन्य भारतीय फिल्महरू तुलना गर्ने हो भने यो निकै राम्रो कमाइ हो।
सबै भाषाका संसकरणहरूको हिसाब जोड्ने हो भने यो भारतभरि वर्षकै सर्वाधिक कमाइ गर्ने फिल्म हो। फिल्मले दसौं दिनमै संसारभरबाट चार सय करोडको कमाइ गरिसकेको छ।
यो चलचित्र रिलिज भएको एघार दिन पूरा भैसकेको छ। एघार दिनमा यसले हिन्दी संसकरणबाट मात्रै १३३.६३ करोड कमाइसकेको छ।
यस फिल्मको कुल लागत ३५० करोड रहेको छ भने यसको हिन्दी संसकरणमा मात्रै ११५ करोड जति खर्च भएको बताइन्छ। आँकडा हेर्दा हिन्दी भर्सनमा मात्र साहो हिट भैसकेको छ।
याे पनि पढ्नुस साहो: पैसा र प्रतिभाको बर्बादी वा नयाँ ट्रेन्डको भारतीय फिल्म?
दक्षिण भारतमा पनि यस चलचित्रको प्रदर्शन बाहुबली २ भन्दा मात्रै कम छ। साढे तीन अर्बको यस चलचित्रले निर्मातालाई बाहुबली २ ले जस्तो फाइदा दिन नसके पनि यो चलचित्र सफल भने भैसकेको छ।
भारतका विभिन्न क्षेत्रीय बक्स अफिस सूत्रहरूले दिएका जानकारी अनुसार साहोले ११ दिनमा सबै भाषामा संसारभरबाट ४३१ करोडको ग्रस कलेक्सन गरिसकेको छ। यस चलचित्रको स्याटेलाइट राइट्स पनि निकै ठुलो रकममा बिक्री भैसकेकाले यस चलचित्रले ५०० करोडको ग्रस कलेक्सन गरेमात्र यो हिट हुनेछ। हिन्दीमा भने फिल्म दोस्रो पहिलो हप्तामै हिट भैसकेको छ।
साहोले प्राप्त गरेको समीक्षा हेर्दा यस चलचित्रको कमाइ निकै राम्रो छ। सुरुमा थुप्रै समीक्षकहरूले यसले राम्रो कमाइ गर्नेमा शंका गरेको भए पनि दर्शकहरूले भने यसलाई राम्रै माया गरेको पाइएको छ।
प्रभास: एक मात्र अखिल भारतीय सुपरस्टार
दुइटा बाहुबली र साहोको सफलताले प्रभासलाई एक मात्र अखिल भारतीय सुपरस्टारको रूपमा खडा गरिदिएको छ। तेलगुभाषी सिनेमाका स्टार प्रभास हिन्दी, तमिल र मलयालम भाषी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन्। भारतमा कुनै पनि अरुई सिनेस्टारले यसरी देशभरबाट दर्शकहरूको माया पाएको छैन।
बलिउडमा लोकप्रिय रहेका अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान या शाहरुख खान आदिका सिनेमा दक्षिण भारतमा रिलिज गरिने गर्दछन् तर तिनीहरूले अक्सर औसतभन्दा मुनि कमाइ गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै हिन्दीभाषी क्षेत्रमा रिज्लिज गरिने दक्षिण भारतीय फिल्महरूले पनि हिन्दी संसकरणबाट सामान्य कमाइ गर्ने गरेका छन्।
याे पनि पढ्नुस साहोको चेपुवामा परेको मारुनीको सन्तोषजनक व्यापार
रजनीकान्तको अभिनय रहेको रोबोट यता दक्षिण भारतीय फिल्मको सम्भाव्य बजारको रूपमा हिन्दीभाषी क्षेत्र देखा परेको हो। तर बाहुबली द बिगिनिङले सय करोडभन्दा बढीको कारोबार गरेपछि भने भारतीय सिनेमाको व्यापारको शैली नै फेरिएको हो।
प्रभासकै अभिनय रहेको बाहुबली २ सबैभन्दा बढी कमाइ गर्ने हिन्दी चलचित्रको रूपमा रहेको छ। पाँच सय करोडमाथि कमाएको यस चलचित्रले प्रभासलाई भारतभरबाट नै सुपर स्टारको रूपमा चिनाएको हो।
बाहुबली २ को रेकर्ड तोड्न नसके पनि साहोले प्रभासको लोकप्रियताको आभास स्पष्टसँग दिलाएको छ।
ट्याग्स: Saaho, साहाे